Siyaasa Oromoo: Mootummaa fi WBO jidduutti araarri eegaluufi – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSiyaasa Oromoo: Mootummaa fi WBO jidduutti araarri eegaluufi
(bbcafaanoromoo)–Mootummaa Itoophiyaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo bosonatti hafe gidduutti araarri fi nagaan akka bu’uuf hojii eegaluu isaa koreen dhimma kanaaf hundaa’e beeksise.
Koreen Araara fi Nagaa Furtuu jedhamu kun dhaabbata tola ooltummaa Furtuu jedhamu jalatti ijaarrame guyyaa har’aa hundeeffamuufi hojii eegaluu isaa labseera.
Ammaan dura yaaliin manguddoonni fi abbootiin gadaa mootummaa fi waraana bosonati hafe walitti araarsuuf taasisan hin milkaa’iin hafeera.
Sababa rakkoo nageenyaa waraana bosona jiruun wal qabateen godinaaleen lixaa fi Kibba Oromiyaa komaandi poostii jalatti bulaa jiru.
Jiraattonni godinaalee kanneeniis waldhabdee mootummaa fi waraana bosonatti hafe jidduu jiruun dararaan adda addaa irra gahaa jiraachuu himataa turan.
<strongclass=”story-body__crosshead”>Koreen kun akkamiin ijaarame?
“Rakkinni Uummata keenyaa nu quuqee kaane” jedhan miseensootni koree araara Mootummaa fi WBO har’a ibsa kennan.
Barreessaa olaanaan korichaa Obbo Lammii Taayyee, korichi hojii araaraa kana hojjechuf qaama mootummaa dhimmichi ilaallatu irraa waraqaa ragaa fudhachuusaa himaniiru.
Koreen kun namoota 13 of keessaa kan qabu yemmuu ta’u hayyoota, artiistoota fi namoota bebbeekamoo biroo of keessatti qabateeera.
Haaluma kanaan Obbo Abbaa Biyyaa Abbaa Joobir walitti qabaa koree hojii raawwachiistuu, artiist Massaluu Taarikuu itti aantuu walitti qabduu, Dooktar Abbabaa Gammachuu, Artiist Ilfinash Qannoo, Dooktar Gammachuu Magarsaa fi namoota bebbeekamoo biroo of keessaa qaba.
Lakkoofsi koree kanaas haala irratti hundaa’uun jijjiramuu akka danda’us ibsicharratti himameera.
Miseensootni Koree Araara fi Nagaa Furtuu dhaaba kamiifu kan hin loogne ta’uu, saba dararamaa jiru akka bakka bu’an himan.
“Imimmaan fi dhiiga saba keenyaa bakka buuna. Wareegama kaffaluu qabnu kaffallee nageenya uumuu barbaadna” jechuunis dubbataniiru.
Miseensotni Koree Araara fi Nagaa Furtuu har’a ibsa laatan korichi mootummaa Itoophiyaa fi Waraana Bilisummaa Oromoof waamicha dhukaasa dhaabuu akka dhiyeessu beeksisaniiru.
Koreen kun gahee haala mijeessuu qabaata kan jedhame yemmuu ta’u qaamoleen lamaan jaarsolii isaan bakka bu’an akka filatan taasifama jedhameera.
Korichis jaarsolii kunneen gorsuun dabalataan dhaabbileen idil addunyaa dubbii araaraa irratti muuxxannoo qaban dhimmicharratti akka hirmaatanis ni taasisa.
Qaamoleen dhimmichi ilaallatu maallaqaa fi meeshaalee adeemsa araaraa kanaaf barbaachisan akka gumaataniifis koreen kun hojii qindeessuu ni hojjeta jedhameera.
Barreessaa olaanaan korichaa Obbo Lammi Taayyee “korichi caasaaleen mootummaa kan akka aanaalee, magaalootaa fi godinaalee sababa rakkoo nageenyaan bulchiinsa koomaand poostii jala jiran deebisanii dhaabuu fi dhaabbilee mootummaa siiviilii jalatti akka bulanif ni hojjeta” jedhan.
Dabalataan intarneetii dabalatee bu’uraaleen misoomaa sababa rakkoo nageenyaan addaan citan akka deebi’anif qaamolee dhimmi ilaallatu walin akka hojjetanis Obbo Lammiin himaniiru.
Miseensootni Koree Araara fi Nagaa Furtuu mootummaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo keessaa tokkon isaanii araaricha kan hin fudhanne yoo ta’e korichi uummata walin ta’uun hojiisaa akka itti fufu beeksisaniiru.
Kana malees gareen lachuu dhukaasa dhaabuf halduree dhiyeessuu hin danda’an jedhameera.
Qaamni waliigaltee dhukaasa dhaabuu diige yoo jiraates korichi uummata fi qaamolee dhimmichi ilaallatu walin ta’un adabbiiwan waltajjiloee idil addunyaa irratti beekkaman hojiirra kan oolchu akka ta’es ibsicha miidiyaalef kan dubbisan Obbo Lammi Taayyee himaniiru.
Dabalataan ibsi koreen kun kenne “hidhannoo hiikun WBO ajandaawwan araaraa keessatti hammatamee waan jiruf marii fi gaaffii dhukaasa dhaabuf akka haaldureetti dhiyaachuu hin danda’u” jedha.
Yaada Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Hogganaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii naannoo Oromiyaa Obbo Getaachoo Baalchaa ibsa Koreen Araara fi Nagaa Furtuu kenne irratti kan argaman yemmuu ta’u “yeroon uummatni Oromoo taa’ee rakkoosaa itti furatu amma” jechuun mootummaan yaada korichaa akka deeggaru himan.
Yaadni koree kanaa barbaachisumaa olaanaa akka qabu fi abdii kan horu ta’uu isaatis himaniiru.
Haa ta’u malee ajajaa itti aanaan raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Birhaanuu Juulaa yaada BBC’f kennanii turaniin mootummaan loltoota kana dhabamsiisaa jiraachuu dubbatanii turan.
Karaa nagaan galuuf fedha qabu yoo ta’e karri banaa ta’uus qondaalli waraanaa kun himaniiru.
‘Olaantummaa seeraa kabachiisuun uummata nagaa ajjeesuu jechuu miti’- ABO
Mootummaan naannoo Oromiyaas koree kana cinaa dhaabbachuun rakkoo jiru furuuf kutannoo akka qabu Obbo Geetaachoo himaniiru.
Koree kanaaf beekkamtti kennuu qofa osoo hin taanee gaafiwwan korichi dhiyeessuf deebii kennuuf qophii ta’uu kan himan Obbo Getaachoon “nagaa fida taanaan wanta isin fiddanii dhuftan hunda fudhachuuf qophaa’aa dha” jedhan.
AKEEKACHIISNII EGYPT hedduu yaaddesinaan waraana garlamaan itti deemuu BILTSIGINAAN sodaattee , Kan biyya keessaa jaamsuuf tattaafachaa jirti.
Tole jettaaree WBO Koo ?
WBO fii MOOTTUUMMA BILTSIGGINNA jidduu , araara buusuuf koreen tokko dhaabbatee Sochii eegaluuf beeksiisa baasee jira. Koreen Kun namoota 13 waliitti dhufuun rakkoo Saba keenyaatiif dhimamee hojii kana Kan eegalaa jiru ta’uu BBC irrattii ibsaniiruu.
Koree kana keessa qabsooftuuf weellistuun kabajamtuu aaddee ILFINASH QANNOO fa’aas Kan hirmaachiseedhas waan jedhu dhageenyee jirra.
Gochii akkasii Yaadaaf hojii gaarii jajjabeefamuus qabu ta’ee otuu jiruu, gamtaan Kun gad bahee , gaafii sabniifii dhimmamtoonnii WBO gaafatan hundaaf deebii kennuun Wal amansiisuu danda’uu qaba.
#1ffaa_WBO araara buusanii duraan galchan sanniin maal irra geessanii jiru.
#2ffaa, WBOn gaafii oromoon gaafaachaa jiru warra gaafii Sabaatiif gamtaadhaan socho’aa jiruudha malee waan biraati miti. Kanaaf gaafiin sabaa deebi’ee jiraa…?
#3ffaa_ araara kanaaf kaachuun duratti warra WBO deeggartan jedhamanii shakkiin hidhaatti doorsifamaa jiran hunda isaanii gadi nuuf lakkisaa..?
#4ffaa_ kanaan booda WBO karaa nagayaatiin galchitan kana keessaa namni tokko badii malee yoo ajjeefame yookiin hidhame koreen Kun maal gochuu danda’a..?
Deebiin isaa waa tokkoolle gochuu hin danda’uudha.
Otuu waa gochuu danda’anii ABBOOTI GADAA, HAADHILEE SIINQEE fii KOREE ARAARAA jechuun jawaar Mohammed faantii itti hirmaatanii WBO karaa nagayaatiin meeshaa hiikkachiisanii biyyattii galchan sannen , yeroo moottummaan deebi’ee ajjeesu, yeroo hidhaatti guuree dararaan boochisu, yeroo hojii dhorgatee , akka sareetti alatti darbatu otuu ijaan arganuu , wanti isaan mootuummaa godhan tokkoolen hin jiru.
Kanaaf kanaan boodas eenyuulle WBO galchinee jechuun yeroof dhaadefamuu malee yakka isaan irratti dalagamuuf itti gaafatamummaa Kan hin fudhanneefii ittiisuullee hin dandeenyee waan ta’aniif WBO Koo ammallee achumattii….
Kan oromoo lolaan guddiichii waaqa.
Biyya bara maraa qabsoofneefii isaan bilisomsuun , INJIFANNOON booda ofiifis sodaatanii nu dhabamsiisuuf nurratti qabsaahaa turte tana, gaafa waaqnii xumura itti nuuf godhuuf yaaduu kana uumee ta’aatii hundaafuu keenya lolaan waaqa.
— Kichuu (@kichuu24) March 5, 202
Hardha gurmuun Koree araaraa ofiin jedhu ibsa kenne jedhan. Diraamaa Shaneen maqaa araaratiin hooftu dha. Tooftaa kanaan Shaneen yeroo lama du’aa kaate. Dura qaama safaffaa malee hin galu jette. Achumaan ummati jibbee itti dhiise. Yoona gurmuun wahii maqaa jaarsummaatiin mootummaa sossobe. Santu akka mootummaan Asmaraa deemee Shanee galchu godhe. Saniin Shaneen lubbuu horatte. Finfinneetti kabajaan simatamte. Gaafa namoota danuu simannaaf bahe agartu ammoo ni machoofte. Machii saniin baatii saditti mootummaa kuffisuuf karoorfattee lola kaafte. Haga Burraayyuu lafa qabatte. Mootummaan kadhatee dadhabnaan tarkaanfii fudhate. Tana keessa shaneetti dubbiin hammaatte. Yoona tuuta wahii gurmeessitee “jaarsummaa” jette. Mootummaan nagaya caalchifatee jaarsummaa simate. Raayyaan tarkaanfii fudhatuu dhaabe. Tana keessa Shaneen afuura fudhattee tooftaa biraatiin of ijaaruuf hiree argatte. Nagaya booressuu fi yakka farra namoomaa itti fufte. Mootummaa nagayaan dubbii fixuuf guddoo yaale. Gaafa ijibbaatu humnaan rakkoo hiikuuf tarkaanfiitti seene. Mandhee Shanee seenee rukute. Shaneetti dubbiin jabaatte. Dhumni Shanee dhiyaatte. Yoona diraamaa sadaffaa qopheessuun “Koree araaraa” jette. Yeroo sadaffaaf du’aa ka’uuf!
Shaneen tooftaa sadiin deemti. Gama tokkoon waraana leenjiftee baadiyyaa Wallaggaatti ummata ajjeefti. Nagaya booressuun piroojektii biliyoona danuu bilaasha gooti. Gama kaanin maqaa qabsoo nagayaatiin magaala keessa yaatee yakkamtootaaf dahoo taati. Jidduutti ammoo maqaa abbaa torbeetiin magaalaatti hooggansaa fi namoota nagayaa ajjeefti! Hojii fi tooftaan ishii waan hin beekamne seeti! Tanaa achi tooftaa dulloomaan ilkaan fixate hin hojjatu!
Amma dhugaa walitti himuu barbaachisa. Koree araaraa wanti jedhan hin jiru. Daawud ibsaa waraana akka hin qabne ifaan waakkate. Qabsoo nagayaa filatee Asmaraa galuu himate. Warri baadiyyaa fi magaalatti yakka farra namoomaa raawwatu shiftaa dha. Shiftaa waliin ammoo dubbiin hin taatu. Biyyi tokko mootummaa lama hin qabaattu. Mootummaa tokko qofatu hidhatuun nagaya biyyaaf ummataa tiksa. Qaamni sanii ala jiru harka kennuu ykn rukutamuu qaba. Kanaa achi lubbuu, qabeenya, bilisummaa fi nagaya uummataatti qoosuun hin taatu. Ololli jaarsummaa fi araaraa hin hojjatu. Olaantummaa seeraa kabajuu fi kabachiisuu qofatu biyya nageessa! Ergamtoota diinaa gootota akka Koomishiinar Salamoon galaafatan baraaruuf diraamaa tolchuun yakka. Taatoti diraamaa araaraa of eegachaa sirbaa jenna!
Taye Dendea Aredo of Biltigna! He is scared !!!